कुखुराकाे अण्डा मांशाहारी काे शाहाकारी ? वैज्ञानिकहरूले निकाले यस्ताे निषकर्ष – Jagaran Nepal
कुखुराकाे अण्डा मांशाहारी काे शाहाकारी ? वैज्ञानिकहरूले निकाले यस्ताे निषकर्ष
कुखुरा पहिले जन्मियो कि अन्डा ? यो प्रश्नले अहिले पनि आम मानिसलाई अचम्मीत बनाएको छ । त्यसैगरी अब अर्को प्रश्न थपिएको छ, अन्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? यो प्रश्नमा पनि कतिपय मानिसहरु दोधारमा नै छन् तर अब अण्डा शाकाहारी हो कि मांशाहारी भन्ने विषयमा विज्ञानले स्पष्ट पारि दिएको छ ।
हामी यस प्रश्नमा धेरै अलमलिन्छौं । किनभने यो आफैंमा मासु जन्य होइन। वा मासु जस्तै कुनै सग्लो शरीर काटकुट गरिएको होइन। तर, यसको स्रोत भनेको कुखुरी नै हो। साथसाथै अन्डा, जसबाट चल्ला पैदा हुन्छ।अन्डा चल्लाको स्रोत मात्र होइन । मिठो खान्की पनि हो। अन्डाको थरीथरी परिकार बन्छ। मासु नखानेहरुले समेत अन्डा खाने गरेको पाइन्छ।
कतिले भने यसलाई मांशाहारीकै कोटीमा राख्ने गर्छन्। त्यही कारण उनीहरु मासु जस्तै अन्डा पनि खाँदैनन् । उनीहरुको तर्क हुन्छ कि, अन्डा भनेको कुखुराले दिने हो। यसले गर्दा यो ननभेज हो। तर, यस्तै तर्क गर्ने हो भने, दुधलाई पनि त ननभेज भन्नुपर्ने ? किनभने यो पनि जनवारले दिने हो। अब जोकोहीले पनि भन्न सक्छ कि, अन्डाबाट बच्चा पैदा हुन्छ। तर, बजारमा पाइने अन्डा अनफर्टिलाइज्ड हो। अर्थात् त्यसबाट कहिले पनि चल्ला पैदा हुँदैन । हुनै सक्दैन। अब भने यो विवादलाई विज्ञानले सफाइ दिएको छ। विज्ञानले भन्छ–अन्डा शाकाहारी नै हो। रिसर्च अनुसार अन्डाको सेतो भागमा केवल प्रोटिन हुन्छ। त्यसमा मासुको कुनै अंश हुँदैन।